सीड्नीको मुटुमा मम, छोयला र बाजेको सेकुवा पाकेपछि‍‍...
सिड्नी, हेमन्त काफ्ले -
मम, सेकुवा, समयबजी देखि छोयला र परम्परागत नेपाली खानाको स्वाद पस्केको एक दिने खाना महोत्सवमा हजारौ नेपाली देखि बिदेशीसम्मले आनन्द लिए। नेपालको चर्चित कुटुम्ब ब्यान्डको प्रस्तुती रहेको कार्यक्रम टु टेबल्सले आयोजना गरेको हो। यसलाई प्यासेफीक हस्पीटालीटी एन्ड कुलिनरीले आयोजनामा सहयोग गरेको छ।
अनिल र नवयुग अस्ट्रेलियामा सम्मानित
एनआरएनएले पहिलो पटक खेलकुद प्रतियोगिता र सम्मानको परम्पराको थालनी गरेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डेले मुलुक चिनाउने महत्वपूर्ण माध्यम खेलकुद रहेकोले खेलाडी राष्ट्रका दूतका रुपमा रहेको बताए।
लभ शाशा लिएर केकी सिड्नीमा
सिड्नी, चैत १७, सेतोपाटी ग्लोवल -
नेपाली कथानक चलचित्र लब साशाको अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा प्रिमियर शो हुने भएको छ। आगामी अप्रिल १ तारिखमा इभेन्ट सिनेमा बरउडमा प्रर्दशन गर्न लागिए लभ साशालाई प्रचण्डमान श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्।
अष्ट्रेलिया पुगेर झुटो बोले शेखर कोइरालाले
अष्ट्रेलिया, दिनेशराज जोशी -
१३ औं महाधिवेशनको एक वर्षमा कार्यसम्पादन विभाग गठन भयो। पदाधिकारी अनि अरु विभाग गठन अब अवश्य पनि होला। यसरी विभागहरु ढिला गठन भयो भनेर आवाज उठाउनु राम्रै कुरा हो तर १२ अधिवेशन समाप्तीको करिब ३ वर्ष पछि विभागहरु गठन हुँदा शेखर कोइरालाले मौन वस्नु भएको थियो। हिजो आफ्नो अनुकुलमा ठिक अनि आज आफ्नो प्रतिकुलमा बेठिक भन्ने प्रवृत्ति अलि राम्रो होइन।
निजी सुसी खन्चुवा प्रतियोगितामा आइज्याक बने च्याम्पियन
सिड्नी, चैत १४, हेमन्त काफ्ले -
प्रतियोगिता पनि थरी थरीका। कतै लडाउने त कुनै पछार्ने, कही छक्याउने त केहि झुक्याउने। यसै बिच सिड्नीको ब्यस्त बजार र्‍यान्डविकमा सोमबार खाने प्रतियोगिता पनि देखियो। अस्ट्रेलियाकै पहिलो निजी सुसी खन्चुवा प्रतियोगितामा बाजी मारे आइज्याक हार्डिङ डेभिसले।
अष्ट्रेलियाको एडिलेडमा नेपालमय
एडीलेड, चैत १३, हेमन्त काफ्ले -
एनआरएनए साउथ अस्ट्रेलियाले सेलिब्रेट कल्चर, एक्सप्रियन्स नेचर’ को नारासहित एडीलेडमा अयोजना गरेको यस महोत्सवमा एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेदेखि स्थानीय राजनितिज्ञ समेतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालसँग रहेको पर्यटनको प्रशस्त सम्भावनालाई अस्ट्रेलियामा प्रचार प्रसार गर्न भूमीका खेल्ने उद्धेस्यका साथ महोत्सवको आयोजना गरीएको एनआरएनए साउथ अस्ट्रेलियाका संयोजक नबिन कंडेल बताउँछन्। ‘नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरू आफैंमा पर्यटन दूत भएकाले मुलुक चिनाउने मेलाका रूपमा यस्ता महोत्सव उपलब्धिमुलक रहेका एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देलले बताए।
मुलुक चिनाउने नौलो माध्यम
फुटबलमा मात्र होइन, क्रिकेटमा पनि केही युवाले आफ्नो पहिचान छाड्न सफल भएका छन्। प्रारम्भमा नेपालबाट आएका केही क्रिकेटरले आफूलाई स्थापीत गर्न निकै मिहिनेत गरे। पढाइको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया आइपुगेका नेपाली खेलाडीहरुले खेललाई पनि पेशा बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास नगरेका होइनन्। नेपालबाट तीन पटक यु १९ विश्वकप क्रिकेट खेलेर यता आएका यशवन्त सुबेदीले स्थानीय क्लबबाट क्रिकेटको सुरुआत गरे।
सिड्नीको सास्ती, सिड्नीको सन्तुष्टी
हामी दैनिक यसैबेला एकअर्कालाई देख्छौ। आज एकै सिटमा बस्यौ। मलाई खसखस लाग्न थाल्यो। पत्रीकामा देखिएका कुरामा गफ गर्न मन लाग्यो। तै पनि एकछिन चुप बसें। मन मानेन। एकछिन सोच्नुस्- सुरवालभित्र गगटो पसेर तल माथि गर्न थाल्यो भने तपाईंलाई कस्तो हुन्छ? मलाई ठ्यक्कै त्यस्तै हुँदैछ। म बोलक्कड मान्छे। जहानसँग साँझको दालभात बाहेक अरु गफ गर्न नपाएको थुप्रै भयो। अर्को बिहानको चिन्ताले सुत्नै हतार हुन्छ। बुढाबुढीको फुर्सिदिलो भेट जुर्ने हप्ताको एक दिन हो। यो भेट पनि जो कोहिलाई लेख्दैन, भाग्यमानी हुनुपर्छ-मेरो साथीले फोनमा यसै भन्छ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाइ सहयोग गर्न अष्ट्रेलियामा कार्यक्रम
सेतोपाटी संवाददाता, मेलवर्न, चैत ९ -
अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरुले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। नेपालीहरुको विभिन्न संस्थाले एक कार्यक्रम गरी त्यसबाट उठेको नगद धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाइ बुझाउन लागेको सरोज खनालले बताए।
म्याडम, जे जस्तो भए पनि देश फर्किनुस् ल!
‘यसलाई घुरेर हेरको भन्दैन म्याडम, मायाले हेरेको भन्छ। कहाँ सबै केटीहरुलाई यसरी मायाले हेरिन्छ र, करौडौँमा एकजनालाई हेरेको थिएँ कुनै जमानामा फेरि धेरै वर्षपछि त्यही आँखालाई एकचोटि नियाल्न मन लाग्यो नि।’ हामी दुबै एकछिन लजाउँछौ। अनि म कुरालाई अन्तै मोड्छु–अनि कतिदिनको सेमिनारलाई आउनुभएको रे?
एडीलेड, चैत ४ -
महंगो अस्ट्रेलियामा धनी नेपाली
सिड्नी, चैत २, हेमन्त काफ्ले -
तीन हजारमा नब्बे वटा घर नेपालीले किनेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु त्यो पनि अस्ट्रेलियामा चानचुने कुरा होइन। अस्ट्रेलियाको घरजग्गा बजारमा लगानी गर्ने बिदेशीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा चिनियाँ छन्। चिनियाँले कुल खरिदको ३३ प्रतिशत घर खरिद गरेको अस्ट्रेलिया सरकारको किनबेच सम्बन्धी तथ्यांकले देखाएको छ। यसैगरी बेलायती र न्यूजिल्यान्डका नागरीकले एघार प्रतिशत र भारतीय नागरिकले दश प्रतिशतमा आफूलाई उभ्याएका छन्।
गायक धितालको ‘यति बेला उनीलाई’ सार्वजनिक
सिड्नी, फागुन २७ (सेतोपाटी) -
सुमुधुर स्वरका गायक नारायण धितालको अर्को म्युजिक भिडियो ‘यति बेला उनीलाई’ म्युजिक नेपालको युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको छ। बेल्जियममा छायांकन गरिएको उक्त भिडियोमा प्रेम प्रसंग र प्राणघातक क्यान्सर रोग लागेर श्रीमती गुमाउनुको पीडालाई निकै मार्मिक ढंगले कथानक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रशान्त तामाङसहितले सिड्नीमा संगीतमय होली मनाउने
सिड्नी, फागुन २७, हेमन्त काफ्ले -
रंगको पर्वका रुपमा मनाइने फागु पूर्णिमालाई यस पटक सिड्नीका नेपाली युवाहरुले सांगीतीक होलीका रुपमा मनाउने भएका छन्। एक्सिस ब्यान्ड र सन्जिव सिंहका आधुनिक संगित र नेपाली मुलका चर्चित भारतीय गायक प्रशान्त तामाङको मनमोहक स्वरले रकडेलको वाइसेन्टेनियल पार्क यस पटक रंगिन हुने भएको छ।
पानीदेशवाट साँइलीलाई पत्र
प्रकाश हुमागाँई -
यहाँ त पानी हेर्ने मात्र हो, पिउने पानीको जोहो गर्न हामी नेपाली मात्रै होइन गोरागोरी, कालाकाली, चेप्टाचेप्टी र चिम्साचिम्सी रातदिन खट्दा रहेछन्। कसैलाई कसैको वास्ता छैन, छ त पानीको छेउमा बसेर पानी कै चिन्ता। हस्मत सावले रचेको र किशोरकुमारले गाएको एउटा गीत खुब सुन्थ्यौ नि ‘हामी सागर कितना मेरे पास हैं, मेरे जीवनमे फिर भि प्यास हैं’, जवानीमा हामीलाई लाग्थ्यो हैं के भनेको होला यो गीतले। त्यसको भाव अहिले बुझ्दैछु साइली। सुखद् जीवनको खोजीमा यहाँ मान्छेहरु भौतारिरहेका छन्, तड्पिएका छन्, हतारिएका छन्, आत्तिएका छन् र तिनै पात्रहरुको भिडमा यो कंक्रिटको जंगलमा म पनि एउटा प्रतिनिधि पात्र बनेर उभिएको छु । ए अँ साच्ची, मान्छेको जीवन त नेपाल मै बुझ्न पाइएको थियो तर एउटा नौलो कुरो चाँही मान्छेले लाटोकोसेरोको जीन्दगीको अनुभव पनि गर्न पाउँदो रहेछ यो पानीदेशमा साइली।
अर्वाड फेलोशिप अन्तर्गत एक दर्जन बिज्ञ अस्ट्रेलियामा
हेमन्त काफ्ले, ब्रिसबेन, फागुन २७ -
नेपाली अनुसन्धानकर्ता तथा नास्टका प्राज्ञ तथा हाल अफ्रिकाको जाम्बिया विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत वैज्ञानिक प्रा. विशालनाथ उप्रेतीले पछिल्लो बिनाशकारी भूकम्पपछि यसको जोखिम अझै कायमै रहेकाले सूचना र चेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
अष्ट्रेलियामा सेफ्स पप अप डिनर
सिड्नी, फागुन २६, सेतोपाटी संवाददाता -
युनिग्लोव विजनेस ग्रुप तथा क्युइनस्फोर्ड कलेजको सहर्काय र टु टेबलको आयोजनामा अष्ट्रेलियाको व्रिस्वेनमा एकदिनको नेपाली खाना प्रवर्धन कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ। ‘सेफ्स पप अप डिनर’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली परम्परागत खानालाई आधुनिक शैलीमा फ्यूजन गरी प्रश्तुत गरीएको थियो।
कठै! अष्ट्रेलियाको जीन्दगी
अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली बिज्ञहरु भन्छन- नेपालमा भूकम्पको जोखिम कायमै छ
ब्रिसबेन, हेमन्त काफ्ले -
अस्ट्रेलियन सरकारको अर्वाड फेलोसीप अन्र्तगत एक महिने भ्रमणमा आएको नेपाली बिज्ञहरुको टोलीले नेपालमा बिनाशकारी भूकम्पपछि पनि यसको जोखिम कायमै रहेकाले सूचना र चेतनाको स्तर वृद्धि गरेर भविश्यमा अझ बढी सजग बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन। नेपालीज एसोसिएसन अफ क्वीन्सल्याण्ड र एनआरएन क्वीन्सल्याण्ड राज्य समितिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले उत्त कुरा बताएका हुन।
सीड्नीमा ‘लुट २’ हाउसफुल
सिड्नी, फागुन २२ (सेतोपाटी) -
पहिलो साता प्राविधिक गड्बढीले खुल्न नसकेको लुट-२ले दोस्रो साता सिड्नीमा सिनेमा बजार तताएको छ । खचाखच भरिएको सिड्नीका सिनेमा हलमा प्राविधिक गडबढी भएपछि आयोजकले माफी माग्दै दर्शकलाई घर फर्काएको थियो।
सावधान अस्ट्रेलियामा अब ‘पिसी’ र ‘डिसी’ चल्दैन!
सिड्नी, फागुन २२, हेमन्त काफ्ले -
प्रारम्भमा अस्ट्रेलियाको प्रवेशाज्ञाका लागि वायोमेट्रिक्स गर्नु पर्दैनथ्यो अहिले टुरिस्ट भिसादेखि हरेक खाले टेम्पोररी भिसाका लागि अनिवार्य बनाइदिएको छ। यसले नक्कली कागजात पेश गर्नेहरुको पहिचानको लागि अचुक बाणको काम गर्दै आएको छ।
अष्ट्रेलियाले अस्थाई कामदार भिसा बन्द गर्ने
सिड्नी, सेतोपाटी ग्लोवल -
अष्ट्रेलियन सरकारले प्रदान गर्दै आएको फाष्टफुड रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने भिसालाइ कटौती गर्ने भएको छ। म्याकडोनल्ड, केएफसी, हङग्रि ज्याक जस्ता फाष्ट फुड रेष्टुरेन्टमा सन २०१२ देखि सरकारले प्रतिवर्ष करिव ५ सय विदेशी कामदार भिसा प्रदान गर्दै आएको थियो।
परदेशका पौरखी हातहरू
बास्तबमै सिड्नीका यी दुई युवाले पेस्ट कन्ट्रोल र सरसफाइको अभियान जसरी भित्र्याए पनि यसलाई फरक वाटो र महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिनुपर्छ । बिदेशमा छरिएर रहेका नेपाली बिज्ञहरुलाई यो चुनौती पनि हो ,जानेको कुरा र सिकेको ज्ञानलाई मुलुक भित्र्याउन सके त्यही नै देशका लागि ठुलो बिकासको आधार बन्नसक्छ भनेर ।
सिड्नीमा आइयो, नेपालीपन पाइयो
सिड्नी, फागुन १४, हेमन्त काफ्ले -
लाग्थ्यो नेपालमा कुनै मेला वा उत्सव चलिरहेछ। ढाका टोपी र चौबन्दी चोली अनि सारीमा सजिएका सयौं अभिभावकको चहलपहलले फरक अनुभूती दिलाएको थियो। कतै दोहोरी त कतै देउडा अनि कही धान नाच त केही असारे भाका चलिरहेको थियो।
अष्ट्रेलियको सपिङ मलमा विमान दुर्घटनाग्रस्त, ५ को मृत्यु (भिडियोसहित)
मेलवर्न, फागुन १० (एजेन्सी) -
अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा हवाईजहाज सपिङ मलमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। विमानस्थलबाट उडेको केहीबेरमै चार्टर गरिएको उक्त विमान मेलवर्नको एउटा सपिङ सेन्टरमा ठोक्किएको अन्तर्राष्टरिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अमेरिका कठीन भएपछि अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी ओइरिए, अवसर र चुनौती बराबर
सिड्नी, फागुन १०, हेमन्त काफ्ले -
उच्च अध्यनको आकर्षक केन्द्र हो अस्ट्रेलिया । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा रेड कार्ड देखाउन थालेपछि नेपाली मात्र होइन दक्षिण एसियानै अहिले अस्ट्रेलियातिर सोझिएको छ। गतिलो शैक्षिक गन्तब्य र कमाउ थलोको रुपमा परिचित बनेको अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीको ओइरो लाग्न थालेपछि यँहाका शैक्षिक परामर्श केन्द्रसँगै कलेजहरुको चहल पहल पनि बढेको छ।
सिड्नीमा समुद्रमा डुबेर एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु, एक बेपत्ता
हेमन्त काफ्ले, सिड्नी, फागुन ३ -
सिड्नीको चर्चित मरुब्रा विचमा सोमबार राति नेपाली युवायुवती हराएका थिए। मंगलबार बिहान उच्चउध्यनका लागि आएकी काठमाडौंकी २३ वर्षिय श्रृष्टी भण्डारीको शव पानीमा भेटिएको खबर प्राप्त भएको छ। समन्द्री तटमा बिहानै दौडन आउनेहरुले लास देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। हराएका अर्का विद्यार्थी झापा बिर्तामोडका सुदीप उप्रेतीको अवस्ठा अझै अज्ञात छ
प्रशान्त महासागरमा प्रेम दिवस
फागुन १ -
प्रेमलाई उत्साहका साथ प्रकट गरिने यो दिनमा युवा युवतीहरुले आफ्नो प्रेमलाई अझ गाढा पार्ने कोशिष गरे पार्टीमा। नेपाली लोकलयदेखि आधुनिक गीतले गुन्जायमान क्रुज प्रशान्त महासागरको तट घुम्दै गर्दा पानीका छालझैं प्रेमिलहरुले आफूलाई संगीतमा ढालेका थिए। करिब तीन सय नेपालीहरुको सहभागिता रहेको यो क्रुजबाट उठेको रकम नेपालको शैक्षिक विकास र खेलकुद लगायतमा खर्चिने नयाका महासचिव प्रकाश खरेलले बताए।
अस्ट्रेलियामा नक्कली बिवाह गरेर आउने नेपालीहरुको बिगबिगी
सिड्नी, माघ २५, हेमन्त काफ्ले -
स्थायीत्वको लोभमा नक्कली बिवाह गर्ने धेरैले आफ्नो घरजम गरेको थुप्रै बृतान्त पनि सुन्न पाइन्छ। तर, नेपालबाट नक्कली बिवाह गरेर डिपेन्डेडमा आउनेहरूको छुट्टीने परम्पराले हाम्रो समाजमा डिभोर्सको अनुपात बढेको देखिन्छ।